MUQDISHO, Soomaaliya - Garabka Daacish ee dalka Soomaaliya ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar toogasho ah oo lagu khaarijiyay xubin ka tirsan Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya ee NISA.
Dilka sarkaalka oo aanan wali magaciisa la hayn, islamarkaana aysan Daacish soo bandhigin ayaa waxa uu ka dhacay shalay oo Isniin ahayd gaara ahaan Galabtii degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir.
War qoraal ah oo lagu soo dabaacay Wakaaladda wararka u faafisa kooxda Daacish ee loo yaqaan Amaq ayaa waxaa lagu tilmaamay in falkaan ay ka dambeeyeen Rag hubeysan oo kooxdaan ka tirsan.
Balse, warar madax banaan ayaa sheegaya in ruuxa la dilay uu yahay qof shacab ah, mana jiro war war ah oo ay Hay’adda NISA kasoo saartay sheegashadda kooxdaan fadhigeeda ugu wayn uu yahay dalalka Suuriya iyo Ciraaq.
Goobjoogayaal ayaa warisdaha Garowe Online u sheegay in goobta dilka uu ka dhacay kadib ay soo gaareen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasoo meydka qaaday, islamarkaana geeyay xarunta CID-da.
Dilkaan ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xili qayb ahaan wadooyinka caasimada ay xirnaayeen, taasoo ka dambeysay markii uu dalka ku yimid qaab qarsoodi ah madaxa sirdoonka dowladda Sudan Saalax Cabdalla Maxamed [Saalax Gosh].
Ujeedka socdaalkiisa ayaa lagu sheegay inay tahay sidii uu udardar gelin lahaa mashruuc ay wadato dowladda Qadar, kaasoo lagu tababarayo saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya, si ay amaanka dalka usugaan.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ay Daacish sheegato dil ka dhacay Muqdisho, waxaana horey u jiray kuwa kale oo ay ku beegsatay askar ka tirsan Booliska, gaara ahaan kuwa Ilaalada wadooyinka oo ay qaarkood muuqaalo kasoo duubtay.
NISA oo Howlgal gaar ah ka fuliyay jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye
Soomaliya 18.03.2018. 11:45
Taliyaha NISA oo la kulmay Ergayga QM Meachel Keating
Soomaliya 08.03.2018. 10:06